ဂူဂဲလ်စာရင်းဇယားများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း | Martech Zone
အသင်း ၀ င်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ညနေပိုင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုအဖွဲ့အစည်း၏စိတ်နှလုံးအကြိုက်ပြုသည့် ၀ န်ဆောင်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကုန်သည်ကြီးများအသင်းပထမနှစ်တွင်ပါသောရှေးရှေးအပေါ်ပိုက်ဆံရှုံးဖြစ်နိုင်သည်မျှမျှတတယုံကြည်တယ် သို့သော်ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့၏အမြတ်အစွန်းများပြားလာပြီးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏တန်ဖိုးသည်ဘယ်သောအခါမျှကျဆင်းမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီညငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောခဲ့သည် Darrin Grey က, သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်အတူကူညီအဖွဲ့ဝင်များကိုအန္တရာယ်သစ်များအတွက်အဖွဲ့ဝင်သစ်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်၎င်းတို့၏အဆက်အသွယ်ခြေရာခံနိုင်မည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု site ကိုအလွယ်တကူမည်သို့တင်မည်နည်း, အပေါ်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒေါ်လာထောင်ချီ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ Darrin ကပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူက“ ငါတို့ရှေးရှေးတွေကသူတို့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအသစ်ပြောင်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကို spreadsheet တစ်ခုတင်လိုက်ရုံပဲ။ ”
ဒီမှာ! Google Spreadheets။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Dale သည်ကျွန်တော်နှင့်အတူစာရင်းဇယားတစ်ခုကိုဝေငှခဲ့ပြီးသူက၎င်းအားစစ်ဆေးရန်ပြောကြောင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိသည်။ ဒီညဟာဒီအချိန်အထိယူခဲ့ပေမဲ့ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သင်၏စာရင်းဇယားကိုသိမ်းပြီးနောက်သင်စာရင်းဇယားကိုတည်းဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်အတွက်လူများအားဖိတ်ကြားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ဂူဂဲလ်အတွက်ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုအတွက် (အကြံအစည်အားလုံးကိုမတော်တဆဖျက်မိတဲ့ nitwit ကိုဆွဲထားရန်) အပြင် Sheet-level permissions အတွက်အကြံပေးချက်ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် ၄ င်းတို့သတ်မှတ်ထားသည့်အဖွဲ့ဝင်များကိုအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေအတွက်စာရွက်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
သို့သော်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခု! ငါအလုပ်လုပ်မယ်ထင်တယ် ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလက Darrin နှင့်ငါသည်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ SIC, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နှစ်ပေါင်း, န်ထမ်းအရေအတွက်နှင့်စုစုပေါင်းအရောင်းပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီးစီးပွားဖြစ် Z-Score တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အရောင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်အလားအလာ ၁/၁၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်စေတယ်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရလာဒ်များမှာပျမ်းမျှအထက်များသာဖြစ်သော်လည်းယခုနှစ်ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေရန်မော်ဒယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
Tags: .ရာဝတီအခန်းမကုန်သည်ကြီးများအသင်းDarrin မီးခိုးရောင်Google စာရင်းဇယားများရှာဖွေရေးtelemarketing